रिलेनसनशिपमा हुँदा गर्न नहुने ५ गल्ती | रेडियो भरतपुर – Radio Bharatpur
सबै गाडी र जहाज ठप्प पार्न यातायात व्यवसायीको माग, मन्त्रीको ‘मौन समर्थन’
कोरोना भाइरस अपडेट : विश्वभरीमा चौथ हजार ७०४ को मृत्यु, तीन लाख ४० हजार सङ्क्रमित
भारतमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रहन दुतावासको आग्रह
कैलालीमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश
जर्मनीमा आजबाट दुईजना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने
भरतपुर २ मा एकहजार मास्क वितरण
फ्रान्सबाट आएकी एक नेपाली विद्यार्थीलाई कोरोना भएको पुष्टि
सोमबार अरु विदेशी मुद्राको भाउ घट्दा बहराइन दिनार भने बढ्यो
लकडाउन’ को पालना गर्नुस्, गम्भीर हुनुस् : भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी
Home स्वास्थ्य रिलेनसनशिपमा हुँदा गर्न नहुने ५ गल्ती
रिलेनसनशिपमा हुँदा गर्न नहुने ५ गल्ती
on: २०७६ आश्विन २५, शनिबार १३:३७ In: स्वास्थ्य
दिनानुदिन मानिसहरुमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको क्रेज यस्तो छ कि मानिसहरु आफ्नो धेरैजस्तो समय विभिन्न किसिमका पोस्ट शेयर गर्नमा नै व्यस्त रहन्छन् ।
मानिसहरु सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवसायिक प्रयोजनको लागि मात्र होइन आफ्नो व्यक्तिगत विषयहरु पनि सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिरहेका हुन्छन् । आफ्ना व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धीत र सम्बन्धसँग जोडिएका विविध कुराहरु सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नु कत्तिको उचित हुन्छ त ?
व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धीत कुराहरु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट वा शेयर गर्दा यसले मानिसको जीवनमा पार्ने प्रभाव निकै नराम्रो हुन सक्छ । के सही वा के गलत हो त्यसलाई पहिचान गरेर मात्रै सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न आवश्यक छ ।
सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवनसँग मेल खाने के–के कुरा सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहुँदैन ?
सामान्य वादविवाद वा झगडा हरेक सम्बन्धमा हुन्छ र यसलाई सामान्य नै मानिन्छ । तर त्यही झगडाको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु वा देखाउनु एकदमै गलत कुरा हो । यसले आपसी झगडा झन् बढाउँछ । यसका साथै त्यसले तपाईंको पार्टनरको आत्मसम्मानमा चोट पुग्न सक्छ । भने, अन्य मानिसको अगाडि उसको छवि नराम्रो हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभन्दा कुनै मिल्ने मान्छेसँग मनको कुरा शेयर गर्नुपर्छ ।
तपाईंको पार्टनरले तपाईंलाई दिएको उपहारको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा देखाउनु गलत हो । उपहारहरु सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्दा पार्टनरको साथ साथै अरुको नजरमा नराम्रो भावना पैदा हुनसक्छ ।
आफ्नो पार्टनरसँग लिएका व्यक्तिगत तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुहुँदैन । यसले विभिन्न समस्या पैदा गर्न सक्छन् ।
घुम्न जाने ठाउँको जानकारी
यदि तपाईं छुट्टिमा कतै घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा नदेखाउनुहोस् ।
यदि तपाईं र तपाईंको पार्टनरबीच ब्रेकअप भएको छ र त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट् नगर्नुहोस् । त्यसले तपाईंलाई मानिसले हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो हुनसक्छ । र पछि पुन सम्बन्धमा सुधार आउने सम्भावना पनि कम हुँदै जान्छ ।
विवाहले खुसी बढाउँछ तर….
दीपिका भन्छिन् : बच्चा जन्माउन हतार छैन
२०७६ चैत्र १०, सोमबार १५:४९
२०७६ चैत्र १०, सोमबार १५:०७
२०७६ चैत्र १०, सोमबार १४:४७
दोसि लाई चाडैं कार्बाही होस
© 2016 Radio Bharatpur. All Right Reserved. Powered by Fine Creation